‘Ka Anyị Hụ Ụmụnna Anyị n’Anya n’Omume Nakwa n’Eziokwu’​—⁠1 Jọn 3:18
AKỤKỌ NDỤ Jehova Na-agọzi Ndị Na-eme Uche Ya
“Ka Anyị Hụ Ụmụnna Anyị n’Anya . . . n’Omume Nakwa n’Eziokwu”
Eziokwu Na-eweta “Ọ Bụghị Udo, Kama Mma Agha”
Josef Onye Arimatia Ekpebie Ịbụ Onye Na-eso Ụzọ Jizọs
Uru Ọhụụ Zekaraya Baara Anyị
Ụgbọ Ịnyịnya na Okpueze Ga-echebe Gị
Otu Ihe Ọma Onye Kraịst Mere
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Amis Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Ọktoba 2017
“Ka anyị hụ ụmụnna anyị n’anya, ọ bụghị n’ọnụ ma ọ bụ n’ire, kama n’omume nakwa n’eziokwu.”​—⁠1 JỌN 3:⁠18.
ABỤ: 72, 124
Olee ụdị ịhụnanya kachanụ?
Olee “ịhụnanya nke na-abụghị nke ihu abụọ”?
Olee otú anyị ga-esi mata na ịhụnanya anyị nwere bụ nke ezigbo ya?
1. Olee ụdị ịhụnanya kachanụ? Oleekwa otú ị ga-esi kọwaa ya? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
IHỤNANYA si n’aka Jehova. (1 Jọn 4:⁠7) Ihe e ji mara ịhụnanya kachanụ bụ ime ihe ziri ezi. Na Baịbụl, ihe a kpọrọ ụdị ịhụnanya a n’asụsụ Grik bụ a·gaʹpe. Ọ bụ eziokwu na mmadụ inwe mmasị n’ebe ndị ọzọ nọ so n’ihe e ji mara ụdị ịhụnanya a. Ma ihe kachanụ e ji mara ya bụ mmadụ iji obi ya niile meere ndị ọzọ ihe ga-abara ha uru. Ọ bụ ịhụnanya na-eme ka anyị na-emere ndị ọzọ ihe ọma. Ụdị ịhụnanya a na-eme ka anyị na-enwe obi ụtọ, na-emekwa ka ndụ anyị nwee isi.
2, 3. Olee otú Jehova sirila gosi na ọ hụrụ ụmụ mmadụ n’anya?
2 Jehova mere ihe gosiri na ọ hụrụ ụmụ mmadụ n’anya tupudị ya ekee Adam na Iv. O kere ụwa ka ndị mmadụ biri na ya ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụghị naanị ebe mmadụ ga-ebi ruo mgbe ebighị ebi, o kere ihe niile ha ga-eji na-ekpori ndụ na ya. Jehova mere ihe ndị a maka anyịnwa, ọ bụghị maka yanwa. Otú ọzọ o si gosi na ọ hụrụ anyị n’anya bụ na ọ gọziri ụmụ mmadụ ma mee ka ha nwee olileanya ịdị ndụ ebighị ebi na Paradaịs ahụ o doziiri ha.
3 Mgbe Adam na Iv nupụụrụ Jehova isi, o kwuru ihe gosiri na ọ hụrụ ụmụ mmadụ n’anya nke ukwuu. Ọ haziri ka Ọkpara ya jiri ndụ ya chụọ àjà iji gbapụta ụmụ Adam na Iv ga-amụ. Obi sikwara ya ike na ụfọdụ n’ime ha ga-ahụ ya n’anya. (Jen. 3:15; 1 Jọn 4:10) Ozugbo Jehova kwere nkwa na Ọkpara ya ga-abịa gbapụta ụmụ Adam na Iv, o weere ya na ọ gbapụtala ha. Mgbe ihe dị ka puku afọ anọ gachara, Jehova nyere ụmụ mmadụ Ọkpara ọ mụrụ naanị ya ka o jiri ndụ ya chụọ àjà. (Jọn 3:16) Obi dị anyị ezigbo ụtọ maka otú a Jehova si hụ anyị n’anya.
4. Olee ihe ndị gosiri na anyị ga-ahụli ndị ọzọ n’anya n’agbanyeghị na anyị ezughị okè?
4 Chineke kere anyị n’onyinyo ya. N’ihi ya, anyị nwere ike ịhụli ụmụ mmadụ n’anya otú ọ hụrụ ha. Ezughị okè na-eme ka ọ na-esiri anyị ike ịhụ ndị mmadụ n’anya. Ma, anyị ga-ahụli ndị mmadụ n’anya. Ebel gosiri na ọ hụrụ Chineke n’anya mgbe o ji ihe kacha mma o nwere chụọrọ ya àjà. (Jen. 4:​3, 4) Noa gosikwara na ọ hụrụ mmadụ ibe ya n’anya. Otú o si gosi ya bụ na o ji ọtụtụ afọ zie ndị mmadụ ozi Chineke ziri ya zie ha n’agbanyeghị na ha egeghị ya ntị. (2 Pita 2:⁠5) Ebreham hụrụ Chineke n’anya karịa ihe ọ bụla n’ihi na o ji obi ya niile kweta iji nwa ya Aịzik chụọrọ Chineke àjà. (Jems 2:21) N’agbanyeghị nsogbu ndị na-abịara anyị, anyị kwesịkwara ịhụ ndị ọzọ n’anya otú ahụ ndị fere Chineke n’oge ochie mere.
GỊNỊ BỤ EZIGBO ỊHỤNANYA?
5. Olee otú anyị ga-esi egosi ezigbo ịhụnanya?
5 Baịbụl kwuru na otú e si egosi ezigbo ịhụnanya ‘abụghị n’ọnụ ma ọ bụ n’ire, kama n’omume nakwa n’eziokwu.’ (1 Jọn 3:18) Nke a ọ̀ pụtara na anyị agaghị agwa mmadụ ihe ndị gosiri na anyị hụrụ ya n’anya? Mbanụ. (1 Tesa. 4:18) Ihe ọ pụtara abụghị naanị ikwu na anyị hụrụ mmadụ n’anya, kama, anyị kwesịrị inyere onye ahụ aka mgbe ọ dị mkpa. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na nwanna enweghị ihe e ji enyere ndụ aka, anyị ekwesịghị ịgwa ya naanị okwu ọma. (Jems 2:​15, 16) Ịhụnanya anyị nwere n’ebe Jehova na ndị mmadụ nọ na-eme ka anyị na-ejechi ozi ọma anya, ọ bụghị naanị ịna-ekpe ekpere ka Jehova “ziga ndị ọrụ n’owuwe ihe ubi ya.” ​—⁠Mat. 9:⁠38.
6, 7. (a) Gịnị ka ‘ịhụnanya nke na-abụghị nke ihu abụọ’ pụtara? (b) Ole ndị ụfọdụ gosiri ịhụnanya nke na-abụghị nke ezigbo ya?
6 Jọn onyeozi kwuru na anyị kwesịrị ịhụ ndị mmadụ n’anya “n’omume nakwa n’eziokwu.” N’ihi ya, ịhụnanya anyị ekwesịghị “ịbụ nke ihu abụọ.” (Rom 12:9; 2 Kọr. 6:⁠6) Mgbe ụfọdụ, mmadụ nwere ike na-eme ka ọ̀ hụrụ mmadụ n’anya, ma ịhụnanya ahụ ọ̀ bụ nke ezigbo ya? Olee ihe o bu n’obi? Ma, è nwere ihe dị ka ịhụnanya nke ihu abụọ? Mbanụ. Nke a abụghị ịhụnanya ma otu ma otu n’ihi na ọ baghị uru.
7 Ka anyị tụlee ndị ụfọdụ gosiri ịhụnanya nke na-abụghị nke ezigbo ya. N’ogige Iden, Setan gwara Iv okwu ka à ga-asị na ọ chọrọ ka ihe dịrị ya ná mma. Ma, ihe o mere gosiri na ọ bụ onye ihu abụọ nke na-achọ ihe ga-abara naanị onwe ya uru. (Jen. 3:​4, 5) N’oge Devid dịrị ndụ, Ahitofel mere ihe gosiri na ọ bụghị ezigbo enyi Devid. Ọ gbara Devid mgba okpuru ka o nweta ihe ga-abara naanị onwe ya uru. (2 Sam. 15:31) N’oge anyị a, ndị si n’ezi ofufe dapụ na ndị ọzọ na-akpata nkewa n’ọgbakọ na-ejikwa “ire ụtọ na okwu ịja mma” eme ka hà hụrụ anyị n’anya. Ma, ihe ha na-eme bụ ịchọ ihe ga-abara naanị onwe ha uru.​—⁠Rom 16:​17, 18.
8. Olee ajụjụ anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị?
8 Ịhụnanya nke na-abụghị nke ezigbo ya adịghị mma n’ihi na a na-eji ya eduhie ndị ọzọ. Mmadụ nwere ike megharịa mmadụ anya, ma o nweghị ike imegharị Jehova. Jizọs kwuru na a ga-ata ndị na-eme ka ndị ihu abụọ “oké ahụhụ.” (Mat. 24:51) Ebe anyị bụ ndị ohu Jehova, anyị ekwesịghị ime ka ndị ihu abụọ. Ma, anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị, sị, ‘Ịhụnanya m, ọ̀ bụ nke ezigbo ya, ka m̀ na-achọ ihe ga-abara naanị onwe m uru?’ Ka anyị tụlee ụzọ itoolu anyị ga-esi gosi na ịhụnanya anyị ‘abụghị nke ihu abụọ.’
OTÚ ANYỊ GA-ESI “HỤ ỤMỤNNA ANYỊ N’ANYA . . . N’OMUME NAKWA N’EZIOKWU”
9. Gịnị ka ezigbo ịhụnanya ga-eme ka anyị mee?
9 Jiri obi ụtọ na-ejere Jehova ozi ọ bụrụgodị na o nweghị onye na-ahụ ihe ị na-eme. Anyị mewere ụmụnna anyị ihe ọma iji gosi na anyị hụrụ ha n’anya, anyị kwesịrị ime ya “na nzuzo,” ma o kwe omume. (Gụọ Matiu 6:​1-4.) Ananayas na Safaịra emeghị otú ahụ mgbe ha na-enye onyinye. Ha chọrọ ka ndị ọzọ hụ ihe ha nyere ma ghaa ụgha n’onyinye ha nyere. N’ihi ya, a tara ha ahụhụ maka ihu abụọ ha. (Ọrụ 5:​1-10) Ma, ọ bụrụ na anyị hụrụ ụmụnna anyị n’anya n’eziokwu, obi ga na-atọ anyị ụtọ ịna-emere ha ihe ọma n’emeghị ka ndị ọzọ mata. Dị ka ihe atụ, anyị nwere ike ịmụta ihe n’aka ndị na-enyere Òtù Na-achị Isi aka akwadebe ihe ndị a na-akụziri anyị. Ha anaghị achọ ime ka ndị mmadụ mata ha ma ọ bụ mata ihe ndị ha so rụọ.
10. Olee otú anyị ga-esi na-asọpụrụ ndị ọzọ?
10 Na-asọpụrụ ndị ọzọ. (Gụọ Ndị Rom 12:10.) Jizọs sara ụkwụ ndị na-eso ụzọ ya ma si otú ahụ kwanyere ha ùgwù. (Jọn 13:​3-5, 12-15) Anyị kwesịrị ịgbasi mbọ ike na-adị umeala n’obi ka Jizọs ma na-ejere ndị ọzọ ozi. Ndịozi Jizọs aghọtachaghị ihe ahụ o mere ruo mgbe ha natara mmụọ nsọ. (Jọn 13:⁠7) Otú anyị ga-esi na-akwanyere ndị ọzọ ùgwù bụ ma anyị ghara ịna-eche na anyị ka ha mma n’ihi na anyị gụrụ akwụkwọ karịa ha, baa ọgaranya ma ọ bụ nwee ọrụ pụrụ iche anyị na-arụ n’ọgbakọ karịa ha. (Rom 12:⁠3) Kama ịna-enwere ndị a na-eto anyaụfụ, anyị kwesịrị iso ha ṅụrịa ọṅụ ọ bụrụgodị na anyị chere na e kwesịkwara ito anyị.
11. Gịnị mere anyị ga-eji kwesị iji obi anyị niile jaa ndị ọzọ mma?
11 Jiri obi gị niile na-aja ụmụnna gị mma. Anyị hụ ihe ụmụnna anyị mere, anyị kwesịrị ịja ha mma n’ihi na ime otú ahụ ‘dị mma maka iwuli ha elu.’ (Efe. 4:29) Ma, anyị kwesịrị ịhụ na mma anyị jara ha si anyị n’obi. Ọ bụrụ na anyị emeghị otú ahụ, anyị nwere ike towe onye ahụ, isi ebuwe ya, ma ọ bụ ghara inye onye ahụ ndụmọdụ anyị kwesịrị inye ya. (Ilu 29:⁠5) Anyị na-eme ihu abụọ ma anyị jaa mmadụ mma n’ihu ma na-akatọ ya n’azụ. Pọl onyeozi emeghị ụdị ihe a. Otú o si jaa ndị ọzọ mma gosiri na ọ hụrụ ha n’anya n’eziokwu. Dị ka ihe atụ, ọ jara Ndị Kraịst nọ na Kọrịnt ezigbo mma banyere ebe ndị ha na-eme nke ọma. (1 Kọr. 11:⁠2) Mgbe ha mere ihe a na-ekwesịghị iji jaa ha mma, o medara obi gwa ha ihe mere na ọ jaghị ha mma.​—⁠1 Kọr. 11:​20-22.
Inyere ụmụnna anyị ndị nọ ná mkpa aka bụ otu ụzọ anyị si egosi na anyị hụrụ ha n’anya ma na-emesapụrụ ha aka (A ga-akọwa ya na paragraf nke 12)
12. Olee otú anyị ga-esi gosi na anyị hụrụ ụmụnna anyị n’anya n’eziokwu ma a bịa n’ile ọbịa?
12 Na-emesapụ aka. Jehova gwara anyị ka anyị na-emesapụrụ ụmụnna anyị aka. (Gụọ 1 Jọn 3:17.) Anyị kwesịrị ibu ihe ọma n’obi na-eme ya ma ghara ime ya ka anyị nweta ihe n’aka ha. Anyị nwere ike jụọ onwe anyị, sị: ‘Ndị m na-akpọ ka ha bịa n’ụlọ m, ọ̀ bụ naanị ndị mụ na ha dị n’ezigbo mma, ka ọ bụ ndị m weere na ha dị mkpa n’ọgbakọ? M̀ na-akpọ ndị m ma na m ga-erite ihe n’aka ha? Ka m̀ na-akpọ ụmụnna ndị m na-amachaghị ma ọ bụ ndị m na-enweghị ike irite ihe n’aka ha?’ (Luk 14:​12-14) Ka e were ya na nwanna bara ná nsogbu n’ihi na ọ hazighị ihe ọ chọrọ ime nke ọma ma ọ bụkwanụ na anyị lechara nwanna ọbịa, o keleghị anyị. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n’ime ihe ndị a mee, anyị kwesịrị ime ihe Baịbụl kwuru. Ọ sịrị: “Na-elenụ ibe unu ọbịa n’atamughị ntamu.” (1 Pita 4:⁠9) I mee ihe a Baịbụl kwuru, ị ga-enweta obi ụtọ n’ihi na i ji obi gị niile meere ha ya.​—⁠Ọrụ 20:⁠35.
13. (a) Olee mgbe ọ na-akacha esi ike inyere ndị na-adịghị ike aka? (b) Olee ihe ndị anyị ga-eme iji nyere ndị na-adịghị ike aka?
13 Na-enyere ndị na-adịghị ike aka. Baịbụl kwuru, sị: “Na-akwadonụ ndị na-adịghị ike, na-enwenụ ogologo ntachi obi n’ebe mmadụ niile nọ.” (1 Tesa. 5:14) E nwere ike iji ihe a Baịbụl kwuru chọpụta ma ịhụnanya anyị ọ̀ bụ nke ezigbo ya. Ọtụtụ ụmụnna anyị ndị na-adịghị ike n’ọgbakọ na-emecha dị ike n’ọgbakọ. E nwekwara ndị nke anyị kwesịrị ịna-enwere ndidi ma na-akwado. Otú anyị ga-esi nyere ha aka bụ iji Baịbụl na-agba ha ume, ịgwa ha ka anyị na ha rụọ n’ozi ọma, ma ọ bụ ige ha ntị mgbe ha na-agwa anyị okwu. Anyị ekwesịghị iwere nwanna ka onye “dị ike” n’ọgbakọ were nwanna ọzọ ka onye “na-adịghị ike,” n’ihi na anyị niile nwere ebe anyị na-eme nke ọma na ebe anyị na-anaghị eme nke ọma. Pọl onyeozi kwetadịrị na o nwere ebe ọ na-anaghị eme nke ọma. (2 Kọr. 12:​9, 10) N’ihi ya, anyị niile kwesịrị ịna-agbarịta ibe anyị ume.
14. Olee ihe ndị anyị kwesịrị ịna-eme ka anyị na ụmụnna anyị na-adị n’udo?
14 Na-eme udo. Anyị na-eme ihe niile anyị nwere ike ime ka anyị na ụmụnna anyị dịrị n’udo ọ bụrụgodị na anyị chere na a ghọtahiere anyị ma ọ bụ mejọọ anyị. (Gụọ Ndị Rom 12:​17, 18.) Ọ bụrụ na anyị mejọrọ mmadụ, anyị kwesịrị ịrịọ onye ahụ mgbaghara. Ma, o kwesịrị isi anyị n’obi. Dị ka ihe atụ, kama ikwu, sị, “Ewela iwe na o wutere gị,” i nwere ike ikweta na o nwere ebe i mejọrọ onye ahụ, ma gwa onye ahụ sị, “Ewela iwe na ihe a m gwara gị gbawara gị obi.” Di na nwunye kwesịkwara ịna-eme udo. Ha ekwesịghị ịpụta n’ihu ndị mmadụ na-eme ka hà hụrụ ibe ha n’anya, ma ha laa n’ụlọ, ha anaghị atụpụrụ ibe ha ọnụ, ha ana-agwa ibe ha okwu ọjọọ, ma ọ bụ na-alụ ọgụ.
15. Olee otú anyị ga-esi gosi na anyị ji obi anyị niile gbaghara onye mejọrọ anyị?
15 Jiri obi gị niile na-agbaghara ndị ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ emejọọ anyị, anyị kwesịrị ịgbaghara ya ma kwụsị iburu ya iwe n’obi. Anyị kwesịkwara ime ya ọ bụrụgodị na onye ahụ amaghị na o mejọrọ anyị. Otú anyị ga-esi gbaghara ya kpamkpam bụ ‘iji ịhụnanya na-ediri ya ihe, na-agbasi mbọ ike ka anyị nọgide n’ịdị n’otu nke mmụọ nsọ, n’ihe nkekọ nke bụ́ udo.’ (Efe. 4:​2, 3) Ka anyị nwee ike ịna-agbaghara onye ahụ kpamkpam, anyị ekwesịghị ịna-eche ihe ahụ onye ahụ mere anyị ka anyị ghara ‘ịgụkọrọ ya ihe ọjọọ.’ (1 Kọr. 13:​4, 5) Ọ bụrụ na anyị eburu ihe ahụ n’obi, ọ ga-eme ka anyị na Jehova na ụmụnna anyị ghara ịna-adị ná mma. (Mat. 6:​14, 15) Anyị kwesịrị ịna-ekpere ndị mere anyị ihe ọjọọ ekpere ma si otú ahụ gosi na anyị agbagharala ha kpamkpam.​—⁠Luk 6:​27, 28.
16. Olee otú anyị kwesịrị isi were ọrụ pụrụ iche e nyere anyị n’ọgbakọ?
16 Na-achọ ihe ga-abara ndị ọzọ uru. E nye anyị ọrụ pụrụ iche n’ọgbakọ, anyị kwesịrị iwere ya ka ohere anyị ga-eji gosi na anyị hụrụ ụmụnna anyị n’anya. Otú anyị ga-esi eme ya bụ ‘ịna-achọ, ọ bụghị uru nke anyị, kama nke onye nke ọzọ.’ (1 Kọr. 10:24) Dị ka ihe atụ, anyị gaa mgbakọ, anyị na-ahụ na ndị atendantị na-ebu ụmụnna ndị ọzọ ụzọ abịa. Kama ha iji ohere ahụ chọrọ oche kacha mma ma ọ bụ chọtara ndị ezinụlọ ha oche kacha mma, ọtụtụ n’ime ha na-anọ ọdụ n’oche ha na-agaghị atụsachara ahụ́ n’ebe ahụ ha na-arụ ọrụ. Ihe a ha na-eme gosiri na ha hụrụ ụmụnna ha n’anya, nakwa na ha anaghị achọ ihe ga-abara naanị onwe ha uru. Olee otú ị ga-esi na-eme ka ha?
17. Olee ihe ezigbo ịhụnanya ga-eme ka mmadụ mee ma o mee mmehie dị oké njọ?
17 Na-ekwupụta mmehie ndị i mere na nzuzo ma kwụsị ha. Ụfọdụ ụmụnna ndị mere mmehie dị oké njọ na-ekpuchi mmehie ha ka ha ghara imechu onwe ha na ndị ọzọ ihu. (Ilu 28:13) Ma, ime otú ahụ gosiri na ha ahụghị ndị ọzọ n’anya n’ihi na o nwere ike ịkpatara onwe ha na ndị ọzọ nsogbu. O nwekwara ike ime ka Jehova wepụ mmụọ nsọ ya n’ọgbakọ, meekwa ka udo ghara ịdị. (Efe. 4:30) Ezigbo ịhụnanya na-eme ka Ndị Kraịst mere mmehie dị oké njọ gaa kọọrọ ndị okenye ka ha nyere ha aka.​—⁠Jems 5:​14, 15.
18. Olee otú inwe ezigbo ịhụnanya dịruru ná mkpa?
18 Ịhụnanya bụ àgwà kachanụ. (1 Kọr. 13:13) Ọ bụ àgwà e ji amata na anyị bụ ndị na-eso ụzọ Jizọs, nakwa na anyị na-eṅomi Jehova, onye ịhụnanya si n’aka ya. (Efe. 5:​1, 2) Pọl kwuru, sị: ‘Ọ bụrụ na enweghị m ịhụnanya, ọ dịghị ihe m bụ.’ (1 Kọr. 13:⁠2) Ka onye ọ bụla n’ime anyị na-ahụ ndị ọzọ n’anya, ọ bụghị naanị “n’ire,” kama “n’omume nakwa n’eziokwu.”
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Ọktoba 2017